Iye zvino tava kukwanisa kurodha nziyo dzinopfuura makumi maviri neshanu kuTunes Match | IPhone nhau
Apple yakawedzera zvakavanzika iyo muganho wenziyo iyo yatinogona kukwira ku iTunes Match uye yedu ICloud Raibhurari. Muganho wanga uriko kusvika parizvino waive nziyo zviuru makumi maviri nezvishanu, muganho wanga uchishanda kubvira pakatanga iTunes Match makore mana apfuura, muna 25.000. Sezviri pachena, patova nevashandisi vakati wandei vakakwanisa kuisa zvinopfuura muganho unozivikanwa Nziyo zviuru makumi maviri nezvishanu kune yako iTunes Match kana yako iCloud Library. Nziyo dzatakatenga kubva kuTunes Store hadziverengeki kusvika pamuganhu uyu.
Kuwedzera uyu muganho chimwe chinhu icho Apple yakanga yatovimbisa muna Chikumi. Akaita izvozvi kuburikidza naEddy Cue, uyo akasimbisa kuti Cupertino-yakavakirwa kambani yakaronga kuisa nhamba yenziyo dzatinogona kuisa kune yayo gore mimhanzi masevhisi, uye zvakazviita pakatanga Apple Music. Cue akati vaizokwidza muganho 25.000 kusvika 100.000 nziyo apo iOS 9 yakaburitswa, asi iOS 9 yakasvika munaGunyana uye kapu yacho yanga yasara pamimhanzi zviuru makumi maviri nezvishanu kusvika nhasi.
Nekudaro, hazvisati zvazivikanwa kuti iko kuwedzera kuri pamutemo kune wese munhu kana ivo vari kuyedza muganho mutsva nevashandisi vashoma. Panga pasina chirevo uye pane yepamutemo iTunes Mapeji peji ichiri kutaura kuti 25.000 chete nziyo dzinogona kuiswa. Kana vakasavandudza mapeji ekutsigira munguva pfupi, tinogona kufunga kuti kuwedzera kwacho kuchaitika zvishoma nezvishoma uye vachangozvigadzirisa kana iko kuwedzera kuri kuwanikwa kune vese vashandisi.
iTunes Match ibasa iri inowanikwa ne € 24,99 pagore Uye izvo zvinosanganiswa muApple Music kunyoreswa pasina imwezve mari. Iko kuwedzera kubva pamakumi maviri nemashanu kusvika zviuru zana nziyo inogona kunge iri mhinduro kuGoogle Play Music sevhisi, sevhisi inobvumidza iwe kurodha 25.000 nziyo, kunyangwe mune yebasa reinjini yekutsvaga tinokwanisa kurodha iyi nziyo yemahara zvachose. Zviripachena kuti nemhando iyi yemakwikwi isu tese tinohwina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Iye zvino tava kukwanisa kurodha nziyo dzinopfuura makumi maviri neshanu kuTunes Match uye iCloud Library
Zvinoenderana neyako post iTunes machesi inosanganisirwa mumumhanzi weapuro asi izvo hazvina kunyatsoita mushe uye unoiburitsa papeji remaapuro kana uchinge uine mimhanzi yeapuro chete nziyo dzaunoteedzera kumakore uye kurodha zvekutanga pane chimwe chimbo chinodzivirirwa DRM ndeyekuti haugone kuishandisa mune mamwe maapplication akaita saDJ2 kana iwe uchida kuve nenziyo dzese pasina kurambidzwa ndakanzwisisa kuti unofanirwa kunge uine masevhisi maviri asi zvinogona kunzi itunes match inosanganisirwa mumumhanzi weapuro asi mune chero kesi zvishoma.
Zodiac: Orcanon Odyssey iyo RPG inonwa kubva kuFinal Fantasy